Faah Faahin: Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ismiidaamin ku qaaday Saldhig AMISOM ee Baraawe - Jowhar Somali Leader
Home Somali Faah Faahin: Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ismiidaamin ku qaaday Saldhig AMISOM ee...
Faah Faahin: Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ismiidaamin ku qaaday Saldhig AMISOM ee Baraawe
Faah faahin ayaa ka soo baxaya weeraro qaraxyo ismiidaamin ahaa oo Al-Shabaab saaka ku qaaday Saldhig Ciidamada AMISOM ku leeyihiin Garoonka diyaaradaha Baraawe, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo.
Qaraxyadan oo loo adeegsaday gawaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ahaa kuwo dhawaaqooda si weyn looga maqlay magaalada Baraawe iyo hareeraheeda.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa sheegay in labo gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ay isku dayeen inay galaan gudaha Garoonka diyaaradaha, balse laga hortagay.
Waxaa uu sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxyadaas, marka laga reebo raggii gaariga waday ee naftood haligayaasha ah sida uu yiri.
Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay in mid ka mid ah gawaarida qaraxyada siday lagu qarxiyay meel 1KM u jirta Garoonka diyaaradaha, halka gaariga kalena uu ku qarxay qeybta gawaarida la dhigto, waxaana burbur soo gaaray qeybo ka mid ah terminalka garoonka oo muraayadaha daateen.
Al-Shabaab ayaa baraha Internet-ka ku qoray in labo weerar is qarxin ah ku qaadeen Saldhigga Ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Uganda ku leeyihiin garoonka diyaaradaha Baraawe, isla markaana khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyay.
Garoonka diyaaradaha Baraawe ayaa dhowaan la dhisay, waxaana saldhig ku leh Ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa ka socda Uganda.